BEST Inc. NYSE ၏ ဆက်လက် စာရင်း စံချိန်စံညွှန်း များ အကြောင်းကြားစာ ကိုလက်ခံရရှိ - Pandaily
Jan 18, 2022, 19:35ညနေ 2022/01/18 23:13:56 Pandaily
Best, တရုတ် အသိဉာဏ် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် ဖြေရှင်းချက် နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေး သူဒါဟာ ဇန်နဝါရီလ 4, 2022 အဖြစ် အမေရိကန် အပ်ငွေ စတော့ရှယ်ယာ များ၏ပျမ်းမျှ ပိတ် ပွဲ စျေးနှုန်း 30 ဆက်တိုက် ကုန်သွယ် ရက်ပေါင်း အတွက် အမေရိကန် အပ်ငွေ စတော့ရှယ်ယာ နှုန်း $1.00 ထက်နိမ့် ခဲ့ သကဲ့သို့, သူက NYSE ၏ ဆက်လက် စာရင်း စံချိန်စံညွှန်း အတွက် သက်ဆိုင်သော စျေးနှုန်း စံချိန်စံညွှန်း များ လိုက်နာ မှု မရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီ အကြောင်းကြား, ဇန်နဝါရီလ 5, 2022 ထံမှ စာ ကိုလက်ခံရရှိ ကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ကြေညာခဲ့သည်။
BEST Inc မှ အသိပေး ချက် ကိုလက်ခံရရှိ ပြီးနောက် ခြောက် လအတွင်း အနည်းဆုံး စတော့ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း လိုအပ်ချက် များကိုပြန်လည် လိုက်နာ သည်။ ထို ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ ADS သည် နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် ဆက်လက်၍ ရောင်းဝယ် သွားမည်ဖြစ်သည်။ နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း ၏ အသိပေး ချက်သည် ကုမ္ပဏီ ၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို မထိခိုက် ပါ။
BEST Inc ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် NYSE တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာသန်း ၄၅၀ ရရှိခဲ့သည်။
၎င်း ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာ သည် အစု ရှယ်ယာရှင် များ မှရရှိသော အသားတင် အမြတ် သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက် ဆိုးကျိုး သက်ရောက် ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၆. ၈၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၀၇ ဘီလီယံ) ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၄. ၆% ကျဆင်းခဲ့ပြီး အသားတင် အရှုံး သည်ယွမ် ၆ ၅၁ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ်သန်း ၆ ၄၀ ထက်ပိုမိုမြင့်မား ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် အမြန် ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း သည်ယွမ် ၃. ၉ ၈၈ ဘီလီယံ ဝင်ငွေ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁. ၇% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကုန် တင်ကုန် ချ လုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၁. ၃ ၅၈ ဘီလီယံ ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Best သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင် ပြည်တွင်း အမြန် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကို J & T Express သို့ ယွမ် ၆. ၈ ဘီလီယံ ဖြင့် ရောင်းချ မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:J & T Express သည် Best Inc. ၏ တရုတ် အမြန် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၁ ဘီလီယံ ဖြင့် ဝယ်ယူ ခဲ့သည်
မကၠဆီကို ႏိုင္ငံမွာ ကြန္ရက္ ေအာင္ျမင္စြာ မိတ္ဆက္ ႏိုင္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အျမန္ ေခ်ာ ပို႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ J & T Express ဟာ လက္ တင္ အေမရိက ေစ်းကြက္ ထဲကို တရားဝင္ ဝင္ေရာက္လာ ၿပီလို႔ ၾကာ သာပ ေတး ေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။